Inkqubo entsha yotyalo mali
Ukurhweba Imfazwe yeNet .com yindawo yokuthengisa yabarhwebi ekurhwebeni indlela yokuhlaziya ulwazi, uhlaziyo kunye neendaba.
Yiya ngokukhawuleza kwixesha lenzuzo
Ukujika ngokukhawuleza kwexesha
Ixesha lomlo, inzuzo, ixabiso lokulahleka linokukhethwa
Ubuncinci imizuzu engama-30, inzuzo engama-50% inokufezekiswa
Ukukhawuleza kwediphozithi kunye nenkqubo yokurhoxisa
Yiya kulawulo olukhuselekileyo lweeasethi
Ukulawulwa kweeasethi ezikhuselekileyo
Itekhnoloji yeBlockchain, ulawulo lwembali yentengiselwano
Inkqubo enkulu yokhuseleko yotshintshiselwano
IXESHA LOKUVULA API
Yiya kuye nawuphina umntu, inzala ephezulu inzuzo
Isizukulwana senzuzo ephezulu kumntu wonke
Ukukhetha umngcipheko ngqo
Imali encinci, ukubuyela okuphezulu okunokwenzeka
Imali enkulu, ulawulo lomngcipheko kunye nzuzo ezinzileyo
Yiya kwinkqubo yokunyathela ngokufanelekileyo
Inkqubo yokunyathela ngokufanelekileyo
Zonke ziqala phantsi kweemeko ezifanayo
Ukhuphiswano lobuchule lobuqu lweVS
Inkqubo ye-blockchain teknoloji yenqanaba
Ixesha lokutyala imali imizuzu engama-30! Isivuno siphindwe kabini!
Inkqubo yokurhweba engalunganga kunye nenqanaba lisebenzisa iteknoloji ye-blockchain, ukutshintshiselana ngotyalo-mali lomntu ngamnye kunye notshalomali lomntu
Ukuveliswa kweparadigm yezemali
Indawo efanelekileyo yokurhweba
Ngonxibelelwano olusebenzayo kunye ne-injini yokusebenza ngokukhawuleza
Ukurhweba okukhawulezileyo nangokuchanekileyo
Inkqubo yokuthengisa iiyure ezingama-24
Yenzelwe iPC kunye neselfowuni,
Ukurhweba okulula kunye nokufanelekileyo ngalo naliphi na ixesha, naphi na
Ukuhanjiswa kwemizuzu engama-30
Ukunciphisa ixesha lokufumana inzuzo
Inenzuzo kwimarike yebhere
Khetha umyinge wakho wokulahleka
Iingxaki eziphezulu kunye nemivuzo
Kwiziko kwaye awunamandla
Ukhuphiswano lomntu ngamnye nolwenziwa ngumntu ngamnye
Urhwebo lwePlatform yoMlo
Iqonga elitsha lokutyala imali usebenzisa iteknoloji ye-blockchain
Ukurhweba njengokudlala umdlalo
Isinxibelelanisi esiphakamileyo kakhulu
Iakhawunti ye-Facebook yentengiso efana nomdlalo
Iakhawunti ye-Twitter yentengiso efana nomdlalo
Iakhawunti ye-Behance yentengiso efana nomdlalo
Iakhawunti yeDrabble yorhwebo olufana nomdlalo
Iakhawunti ye-Linkedin yentengiso efana nomdlalo
Siceba ukunika abasebenzisi iimvakalelo zokudlala umdlalo wobuchule bokulinganisa. Kwixesha elizayo, iithokheni ezahlukeneyo zingasetyenziselwa ukuthenga nokusebenzisa imisebenzi eluncedo kurhwebo.
Ukusetyenziswa kwe-API evulekileyo yotshintshiselwano olukhulu
Iakhawunti ye-Facebook ye-API ye-OPEN
Iakhawunti ye-Twitter yeOPEN API
Iakhawunti ye-Behance yeOPEN API
Iakhawunti Dribble yeOPEN API
Iakhawunti ye-Linkedin yeOPEN API
Ngokungafaniyo nenkonzo ekhoyo yokubambisa yokuthengisa, inkonzo yedabi lokurhweba isebenzisa i-API evulekileyo yokutshintshiselana ye-cryptocurrency kwaye isebenzise iingcaphuno zexesha langempela kunye nezinto ezinqabileyo njengoko zinjalo.
Imithetho yasimahla yemidlalo
Imigaqo yedabi emiselwe ngumsebenzisi
Iakhawunti ye-Facebook yemithetho yasimahla yomdlalo
Iakhawunti ye-Twitter yemithetho yasimahla yomdlalo
Iakhawunti ye-Behance yemithetho yasimahla yomdlalo
Iakhawunti ye-Dribble yemithetho yasimahla yomdlalo
Iakhawunti ye-Linkedin yemithetho yasimahla yomdlalo
Yonke imithetho yokulwa kwenkonzo yokulwa uMlo ugqitywa ngumsebenzisi. Umsebenzisi uthatha isigqibo semigaqo ephuma kwimigaqo ebekwe yinkampani. Siza kuqhuba kwidabi lokurhweba phakathi kwabasebenzisi abaqokelelweyo ngokwemigaqo ozibekele yona. Akukho ukungavisisani komsebenzisi ngaphezulu kweziphumo kunye nokwahlulahlula.
Sebenzisa izinto zomdlalo
Iakhawunti ye-Facebook yethoni yeTBT
Iakhawunti ye-Twitter yophawu lweTBT
Iakhawunti ye-Behance yeTBT
Iakhawunti yeDrabble yophawu lweTBT
Iakhawunti ye-Linkedin yophawu lweTBT
Iithokheni ezahlukeneyo zingacelwa ukuba zenze igumbi lokulwa, kwaye inani elithile lemivuzo lihlawulwa kumalungu adala indawo yokulwa. Imidlalo eyahlukeneyo ye-mini iza kusungulwa kwinkonzo yokuthatha inxaxheba kwimidlalo encinci. Umdlalo omncinci ngumdlalo ocacileyo kwaye uza kusebenzisa iithokheni ezahlukeneyo ukuthatha inxaxheba.
Inkqubo ethembekileyo kunye netekhnoloji
Umsitho wamalungu obulungu (amathokheni e-30 e-TBET)
Ulwazi malunga neMfazwe yokuRhweba
Ukurhweba Imfazwe yamva nje, uKwazi, iiNdaba, uLuntu lwabaThengisayo
Ngaphezulu kwe-1 lamawaka eedabi zokurhweba
Iqonga lethu lomlo lokurhweba lidlula i-6 lababhalisile behlabathi ngoku kwiintsuku ezingama-10 emva kokubhengezwa komsitho wokunikezela kwangaphambili kuka-Juni. Enkosi kwakhona ngenzala yakho nothando. Siza kwenza konke okusemandleni ukukubonisa ngenkonzo ekhuselekileyo nencono yokuhlawula inzala yakho. Enkosi kwakhona. Bonke abasebenzi beqonga lokulwa.
Isishwankathelo seTBETET SIBONELELO Molweni, le yimfazwe yokulwa. Inkonzo yokuHwela iMfazwe yeqonga liqonga labasebenzisi lokuseta imithetho yedabi (ixesha, ibhaso, njl njl) kwaye urhwebe amathokheni ahlukeneyo kwiitshintshiselwano ezinkulu ukuqhuba iimfazwe kunye nokumisela imigangatho yokuwina amabhaso. Namhlanje, ndingathanda ukuchaza ithokheni ye-TBET. Ithokheni yeTBET i-Overview yeTBETET yiTranscurrency eza kusebenza njengemali yokwenza iiprojekthi kunye nokusebenzisa iinkonzo zorhwebo, kunye neenkonzo zokuloba. Intshayelelo Ngophawu olubanzi lweTBETET[...]
Ukusetyenziswa kweethokheni ze-TBET
Ukusetyenziswa kweempawu zeTBET amathokheni eTBET asetyenziselwa ukusebenzisa imisebenzi eyahlukeneyo kunye neenkonzo ezibonelelwa kwiimfazwe zorhwebo. Ukongeza, umsebenzi wokusebenzisa amathokheni e-TBET uya kuphuhliswa ngokuqhubekayo. 〉 Isaphulelo semali yokuThengwa kweMfazwe yokuThengiswa kweMigangatho yeenkonzo zorhwebo zinokwahluka ngokuxhomekeke kwinqanaba lokubuya kwe-0.01%. Ukongeza, ukwenzela ukwenza inzuzo kwiinguqu zentengiso ezisezantsi, iikhomishini eziphantsi zinempembelelo enkulu. Abathathi-nxaxheba bomlo Intshayelelo Ukusetyenziswa kweTogo kweTBETET[...]
Inkqubo yokuthengisa iBlockchain
Inkqubo yokuThengisa yeBlockchain Siza kusebenzisa ubuchwephesha be-blockchain ukuphucula ukucaciswa kweemfazwe zokurhweba.Siya kufunda ukuze siqiniseke ukuba ukuthengiselana kungenziwa emva kokuba yonke into ithengise / ithenge iodolo yodlulisa ubungqina be-blockchain. Ukuze ubonelele ngeenkonzo ezinjalo, kuyimfuneko ukuba kuphuhliswe inkqubo ye-blockchain enobungqina bexesha lokuthenga. Sisebenzisa izisombululo ze-blockchain ezivela kwiinkampani ezinobungqina obuqinisekisiweyo kunye nokhuseleko oluphezulu lokuphucula inkqubo. Intshayelelo INkqubo yokuRhweba yeBlockchain[...]
Kutheni wakhe umlo wokurhweba kwi-blockchain
Sinamava okuqhuba iinkonzo zotyalo-mali lwe-cryptocur lwemali ngaphambi kokulungiselela iprojekthi yokulwa. Siqinisekisile iimfuno ezininzi zabasebenzisi ngenkonzo. Phakathi kwabo, eyona mibuzo ibalulekileyo evela kubasebenzisi kunye nomqobo kwinkonzo yayikukungqinwa kwezinto elubala zokungabinamali kunye nokufakwa kwinqanaba '. Sigqibe kwelokuba sithathe inxaxheba kwitekhnoloji ye-KwonTight ye-blockchain smart ukuze sikhulise iinkonzo zethu eziqinisekisiweyo. Ukongeza, uninzi lweenkonzo ezikhoyo kwafuneka ziphathwe ngabasebenza ngokwazo. Intshayelelo izizathu ezingakumbi zokwakha iiMfazwe zokuThengisa kwiBlockchain[...]
Inzala ebalulekileyo yenzala kunye neengxowa mali ezincinci zotyalo-mali
Ukubonelela ngeenkonzo ukwenza inzuzo ngezakhono zorhwebo, hayi imali encinci yokuvelisa inzuzo, nokuba yimali encinci yokutyalomali. Kwitransekshini ekhoyo, i-0.1ETH inokutyalwa ukuze ifezekise i-100% yesivuno, kodwa inokufumaneka kuphela i-0.2ETH. Nangona kunjalo, ngenkonzo yethu yedabi lokurhweba, unokutyala i-0.1 ETH kwaye ufumane i-1.0 ETH kwimfazwe enye. Service Inkonzo yamandla efumana inzuzo ngexesha elinye edabini kutyalo-mali olulindele ukunyuka emva kotyalo mali Intshayelelo Inzuzo ethe kratya yokudala inzuzo ngemali encinci[...]
Umbono weNkonzo yokuThwela ukuHamba
Ijolise ekuboneleleni ngerhwebo lokulwa inkonzo enokufezekisa ukubuya okukhulu kutyalo-mali nakwimali encinci. Inkonzo yokurhweba nge-Cryptocurrency isombulula ingxaki yokuthengiswa kwemali okwakha iinkonzo isebenzisa i-API evulekileyo yokutshintshiselana nge-cryptocur lwemali ngokubonelela ngobuninzi bobuchwephesha. Kwinkonzo yethu, amandla okurhweba komsebenzisi yeyona nto ibaluleke kakhulu. Bonke abasebenzisi bangena kwigumbi lokulwa abalifunayo kwaye bakhuphisane ngokurhweba ngeempahla ezifanayo zokusebenza. Intshayelelo Umbono weNkonzo yokulwa umlo[...]
Ungadlala njani ngeemfazwe ezilula kunye nemidlalo encinci neengxaki zokungcakaza
Uluntu Q. Kukubheja njani kwidabi elilula & umdlalo omncinci kunokuba yingxaki kamva ngokungcakaza? UMphathi: Siphonononge imicimbi yezomthetho kunye nomxholo wophando, kwaye i-FX neminye imidlalo efana nayo iyingxaki kuba bavuzwa ngesiphumo sethuba. . Uluntu Q. Ukuba ungumntu olungileyo wokurhweba, ungasebenzisa umda Ukwazisa okungakumbi ukubheja kwidabi elilula & umdlalo omncinci yingxaki yokungcakaza[...]
Ngaba kukhona utshintshiselwano olucwangcisa ukudweliswa ngo-2020?
Ngaba kukhona utshintshiselwano olucwangcisa ukudweliswa ngo-2020? UMphathi: Sibonelela ngeenkonzo ze-bot kwiinguqu ezininzi ze-cryptocurrency kwaye sinxibelelana nabaphathi abatshintshisanayo. Nangona kunjalo, njengoko silungiselele ixesha elide, silungiselela uludwe lokuqala kutshintshiselwano olukhulu, ke ukuba ufuna ukujonga uluhlu lwamva, nceda uye kwigumbi lethu leTelegram ngaphambi kwexesha ukubona isibhengezo sexesha elifanelekileyo. Kwaye le projekthi ijolise kwinkonzo yehlabathi jikelele kunenkonzo yaseKorea. Intshayelelo Ngapha koko, lukhona na utshintsho olwenziwayo lokudweliswa ngo-2020?[...]
Ngaba ndingathatha inxaxheba kukhuphiswano oluninzi ngexesha elinye?
Q. Ngaba ndingadala amagumbi amaninzi kwaye ndithathe inxaxheba kukhuphiswano oluninzi ngexesha elinye? UMphathi: Nawuphi na umsebenzisi unokudala amagumbi okulwa amaninzi kwaye athabathe inxaxheba kumagumbi okulwa amaninzi. Isicwangciso esikhoyo siceba inani eliphezulu labathathi-nxaxheba. Siceba ukuhlengahlengisa umda wokuthatyathwa kwenxaxheba ezininzi ngelixa ujonga iimfuno zabasebenzisi kunye neemeko zokuthatha inxaxheba ezininzi. Icandelo le-Q&A ekuhlaleni Q. Ukuba ujonga iphepha elimhlophe, Intshayelelo Ngaphezulu ndingaba nenxaxheba kukhuphiswano oluninzi ngexesha elinye?[...]
Baninzi kuphela abasebenzisi abaza kulwa kurhwebo
Likhulu kuphela inani labasebenzisi eliya kuthi likwazi ukulwela ukuthengisa uQ. Zeziphi izibonelelo ezinokufunyanwa ngabasebenzisi? Ukongeza, kubonakala ngathi kuya kubakho abasebenzisi abaninzi ukuba bakwazi ukwenza iimfazwe zokurhweba, kodwa ndinomdla kwimisebenzi ethile kunye nezicwangciso zokuthengisa kwixesha elizayo. UMphathi: Okwangoku, imibuzo emininzi ifunyenwe ngentsebenziswano ne-PR kunye nemisebenzi yokuthengisa eKorea nakwamanye amazwe. Siceba ukusebenzisana ngenkuthalo kunye nabathengisi ekunxibelelaneni, kwaye silungiselele imifanekiso yeqonga ngokubamba ukhuphiswano kurhwebo oluqhutywa rhoqo kwiimveliso. Ukwazisa abasebenzisi abaninzi ukuba babe kwidabi lokurhweba elinabasebenzisi abaninzi[...]
Thenga kwaye usebenzise iithokheni ze-TBET kunye nezinto ezincitshisiweyo
Q. Ukulwela iimfazwe, ukubeka ixesha, ibhaso, njlnjl, kunye nezinto zokuthenga ngentlawulo yeTBET amathokheni.Lolu phawu lukwasetyenziselwa ukudala amagumbi emfazwe, kwaye yintoni umahluko kwiinkonzo zokwenza imali zokulinganisa ezikhoyo? Ucinga ukuba siyintoni isizathu sokusebenzisa inkonzo yedabi lokurhweba kunye nezibonelelo (ukubuya, njl njl) ozifumanayo!? UMphathi: Ndiyayiqonda ukuba injongo kunye nezibonelelo zokusebenzisa utyalomali ohlukileyo zahlukile. Olona ncedo lukhulu lokusebenzisa umlo wokurhweba ukuthengisa ii-asethi zedijithali Yazisa ngakumbi i-TBET Tokens, izinto ezincitshisiweyo ezisetyenziselwa ukuthenga[...]
Ukurhweba inkonzo yokulwa ngendlela eyenza imali ngezakhono zokurhweba ezinyulu
Q. Ukuba ufunda iphepha elimhlophe, iithokheni ze-TBET kuthiwa zikhulisa inzuzo ngokwenza iinkonzo zedabi lokurhweba ngokwenza isibonelelo esivela kwizakhono zokurhweba ezingezizo, ngokupompa imali ngamandla oxhaso.Mzekelo, 0.1% iphindwe kabini ngenzuzo ye-100ETH Ufumana i-2 ETH ngaphakathi, kodwa ithokheni ye-TBET ithi nokuba utyala imali kwi-EE ye-0.2 efanayo, unokwenza i-0.1 ETH kwimfazwe enye. Kumphezulu, ivakalelwa ngokufanayo kurhwebo lwendlela, kodwa umahluko phakathi korhwebo lwendlela kunye nenkonzo yokuthengisela amathokheni e-TBET Ukwazisa ngakumbi inkonzo yokulwa idabi ngendlela eyenza imali ngezakhono zokurhweba ezinyulu[...]
Ukudalwa kwegumbi lokulwa kuyafuneka kwidabi lokurhweba
Kuyaziwa ukuba ukuba ukudalwa kwegumbi lokurhweba kuyafuneka kwiimfazwe zokurhweba, kwaye inani elincinci labathathi-nxaxheba alithathi nxaxheba kwigumbi lokulwa elidalekileyo, ithokheni ye-TBET esetyenziselwa indalo kunye nokucinywa kwegumbi lokulwa ayiyi kubuyiswa. Ukuba kunjalo, leliphi elona nani lincinci labantu liyafuneka kwaye zeziphi ezinye zeendlela zokukhuthaza igumbi lam lokulwa? Umphathi: Ubuncinci benani labantu ukuqala umlo, kubandakanya nenkokeli Intshayelelo Ukurhweba ngakumbi kwidabi kufuna ukudala igumbi lokulwa.[...]
Nguwuphi umfutho oqhubekayo weempawu zeTBET?
Q. Kumbono wotyalo mali, ndingathanda ukuba le projekthi inyuse ixabiso layo lotyalo-mali ngokuqhubeka kophuhliso. Kwimeko yeemfazwe zokurhweba, ndiyazibuza ukuba ngaba ngumcimbi wexesha elifutshane. Yintoni amandla aqhubekayo? Imisitho enxulumene norhwebo ibanjwa kutshintshiselwano ngezihlandlo ngezihlandlo. Iingqekembe ezikhutshwe ngotshintshiselwano zikwanikwa njengembuyekezo. Yintoni eyahlukileyo kule? UMphathi: Ukuza kuthi ga ngoku, zintathu iinkonzo ezikhoyo zokusebenzisa amathokheni e-TBET eqongeni. Kwifom ethi wonke umntu utya i-TBET ngokuqhubekayo Intshayelelo Ngaphezulu Yintoni i-tokens yeTBET eqhubekayo?[...]
Zisetyenziswa njani iithokheni ze-TBET?
Q. Zisetyenziswa njani iithokheni ze-TBET? Yintoni umahluko kwiqonga esele likho? I-CEO: ithokheni ye-TBET yimali ye-cryptocurrency eya kuba noxanduva lokusebenza kwemali yokwenza iprojekthi kunye nokusetyenziswa kwenkonzo yedabi lokurhweba, kwaye ukusetyenziswa kwenkonzo kwidabi lokuthengisa kuphela ngethokheni ye-TBET. Iithokheni ze-TBET zisetyenziswa okokuqala, izaphulelo kwimirhumo yokulwa yomlo. Uluhlu lwenkonzo yokulwa idabi lokulwa linokwahluka nokuba isivuno sikwi-0.01%. Kwakhona iikowuti ezisezantsi Intshayelelo: Ngaba isetyenziswa njani ithokheni ye-TBET?[...]
Yintoni iQonga lokuRhweba ngeMfazwe?
Q. Yintoni iqonga lokuThengisa ngeMfazwe? Kubonakala ngathi njengeqonga elingaziwayo, kodwa nceda ucacise ngokweenkcukacha. UMphathi: Ukulwa imfazwe liqonga lokurhweba elidibanisa izinto ze-'Battle 'kunye nokurhweba kweempahla zedijithali. Abasebenzisi bathabatha inxaxheba kwigumbi ledabi elinomrhumo ofanayo wokuthatha inxaxheba (i-ETH) ngaphakathi kweqonga kwaye bathengise ngexesha elifanayo kunye neengxowa-mali, emva koko i-50% ephezulu yabasebenzisi abanembuyekezo ephezulu babelana ngemali yokuthatha inxaxheba (i-ETH). Ngenkqubo enjalo yedabi, abasebenzisi banokurhweba ngakumbi kunorhwebo besebenzisa utshintshiselwano esele lukhona. Intshayelelo Ngakumbi Yintoni iqonga lokuRhweba ngeMfazwe?[...]
Ukuthengisa iProjekthi yokulwa iPhulo
Q. Nceda wazise kwaye projekthi ngokufutshane. UMphathi: Molo. Lo ngu-Suwon Kim, u-CEO weProjekthi yokulwa iMfazwe. Ukuzazisa ngokufutshane, ndisebenze njengomlawuli osebenzayo weAviBot, elilungu kwenkonzo yokuthengisa ezenzekelayo yeBithumb, kwaye ndaqhubela phambili netekhnoloji ye-API ebonelelwe ngotshintshiselwano ukubonakalisa iprojekthi yangoku. Ndizukisiwe ukukwazi ukwazisa iprojekthi yokuqala evela kwiShrimp Fishing Boat. Iprojekthi yethu ayisi malunga nokuthengisa kunye nokuthenga kwimarike ye-cryptocurrency, imalunga nokuthengisa ii-asethi zedijithali. Intshayelelo Ngakumbi Ukurhweba ngeProjekthi yokulwa iPhulo[...]
Isazisi se-Katok: I-24MEX
I-Zerif Lite umphuhlisi: UmxholoIsle